१४ भदौ - बेइजिङमा पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। तर त्यसका कारण यहाँका जनता आतंकित भएको सुनिँदैन। यहाँ पैदल यात्रुहरूलाई समेत हिँड्न वा ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकबाट रोकिनुपर्ला भन्ने चिन्ता छैन।
१ भदौ - माग्नेलाई जेल सजाय गर्ने भन्ने नयाँ कानुनी व्यस्थाबारेको बहसले यतिबेला सामाजिक सञ्जाललाई तताएको छ।
२९ साउन - जब एक नेपाली जन्मन्छ उसको थाप्लोमा २९ हजार बराबरको ऋण थोपरिन्छ भन्ने जानकारी तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनु आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ।
२३ साउन - मलेसियाले युवालाई स्थान दिएको छ। आफ्नो देशमा दुई छाक खाने रोजगारसमेत नपाएर त्यही मलेसियालगायत देश जान बाध्य युवाको देश नेपालले यसबाट कहिले पाठ सिक्ने?
१९ साउन - नेपालको धीमा विकासको चित्रण पुरातन शैलीको गुन्द्रुक ढिंडोले गर्दछ। जब कि दशकभित्रै हाइस्पीड रेलले कंगारू स्टाइलमा फड्को मार्नुलाई नवीन अध्यायका रूपमा चीनमा प्रतिविम्वित गरिन्छ।
१३ साउन - भविष्यमा चीनले तिब्बतलाई विदेशीका लागि खुल्ला गर्नेछ। विदेशीहरू तिब्बत पनि हेर्ने र सगरमाथा पनि चढ्ने ध्येयले उत्तरी मोहडातर्फ हानिनेछन्। चीनले तिब्बतमा विदेशीलाई सजिलै कहाँ जान देला र भन्ने नेपालीहरूको प्रश्नको उत्तर त्यतिखेरै मिल्नेछ।
प्रत्येक शब्दमा रिल्याक्स रसायन
१२ साउन - मानिलिऊँ कि खुसीको रस विद्युतीय बल्ब हो भने मुखको शब्द त्यसको स्विच हो। मानवीय मुखरुपी खुसीको स्विचवर्ड अति सजिलो गरी खुल्छ तर यसको मूल्य भने असोचनीय हुन्छ। योभन्दा रहस्यमयी यन्त्र सायद दुनियाँमा बिरलै होला।
७ साउन - झन्डै आधा घण्टापछि पानी पर्न रोकियो तर मेरो मनको छट्पट्टी रोकिएन। उठेँ र ल्यापटप खोलेँ।
७ साउन - पहिलो पटक आफ्नो देश छोड्न लागेकाले पनि होला जिज्ञासा, उत्साह रोमाञ्चकता सबै एकै साथ दिमागभरि घुमिरहेका थिए।
विमान उड्ने बेला विछोडको पीडा
६ साउन - विदेश आउजाउ गर्ने क्रममा जब म अरबका एअरपोर्टहरूमा पुग्छु, तब मलाई सधैं एउटा पीडाले सताउन थाल्छ।
५ साउन - बीपी कोइरालालाई समर्थन गर्न लोकनायक जय प्रकाश नारायण, चन्द्र शेखर जस्ता मुर्धन्य नेताहरू उपस्थिति भएका थिए। मञ्चमा शैलजा आचार्यपनि हुनुहुन्थ्यो। नागेन्द्र झा, शिव मधुकर, जगन्नाथ दास, म अनि सप्तरीका केही साथीहरू पनि थियौँ। यो तस्बिर उही बेलाको हो।
३१ असार - नेपालमा हिमाली उद्धारको फरक इतिहास छ। यो एउटा विशुद्ध मानवीय भावनाका साथ सुरु भएको हो।
२४ असार - क्यानडाको भ्यानकुभरमा जुलाई ९ देखि १३ सम्म विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजना हुँदै थियो।
१८ असार - डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको हलको अवस्था राम्रो छैन। हलमा बस्ने चराहरुले उहाँ सुतेको ओछ्यानमै दिसा गर्छन्। हल अँध्यारो र चिसो भएकाले डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। चिसो र निरन्तरको वर्षाले उहाँको स्वास्थ्यमा सोझै असर पारेको छ।
१७ असार - उसले थप्यो, ‘त्यो केटीले मलाई फसाई यार।’ ‘त्यो केटी?’ ‘हो, त्यही रेबिका जसको डिपेण्डेन्टको रुपमा म यहाँ आएको थिएँ’, पियूस आक्रोशित भयो। ‘साला, विदेश आउने बहानामा अपरिचितलाई विश्वास गरियो।’
१० असार - रसियामा विश्वकप फूटबल हुँदैछ भनेर यहाँ बस्दै आएका नेपालीबीच एक किसिमको ठूलै उत्साहको सञ्चार भएको छ।
७ असार - असार ३१ बाट रुसमा सुरु हुने २१औं संस्करणको विश्वकपले सबैको ध्यान तानेको थियो।
४ असार - नेपालमा विश्वकप फुटबल टेलिभिजनमा लाइभ आउन सुरु भएदेखि नै म हेर्दै आएको छु।
२ असार - ‘हाम्रो बच्चादेखिको सपना साकार भएको छ’, नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा मान्यता पाएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। सपनाको महत्व कति छ भन्ने कुरा नेपालको क्रिकेटले प्राप्त गरेको त्यो ऐतिहासिक सफलताबाट पुष्टि हुन जान्छ।
पाइलट विजय लामाः विमान उडाउँदा एटिसीबाटै विश्वकप अपडेट लिन्छु
१ असार - वि.सं २०२४–२५ सालतिर। म त्यस्तै १३–१४ वर्षको थिएँ। त्यतिबेला सबैको घरमा टेलिभिजन हुदैँनथ्यो।
१८ जेठ - ‘फ्लाई दुबईको उडान नं. एफजेड ५७१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार दिउँसो ३ः४० बजे अवतरण गर्दैछ। त्यो उडानबाट सुनका १० बिस्कुट आउँदैछन्। त्यो सुन ल्याउने व्यक्तिले पार्किङ क्षेत्रमा महिलालाई झोला दिनेछन्।’
१५ जेठ - चुचुरोमा पुग्ने बेलामा रजस्वला भएकोले गर्दा आरोहणमा निकै अप्ठ्यारो झेल्नु पर्यो। त्यो अप्ठ्यारो म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। सामान्य अवस्थामै रजस्वला हुँदा गाह्रो हुन्छ। त्यो कठिन क्षणमा आफूमा आएको परिवर्तनलाई मैले अत्यन्त दृढतापूर्वक सामना गरेँ।
१४ जेठ - दलित समुदायको उत्थान, विकास तथा समृद्धिको लागि प्राथमिकताका साथ उल्लेखनीय रुपमा नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नगरी न्यून रुपमा मात्रै हुने गरेको छ।
बालुवाटारको त्यो पहिलो बैठक
१३ जेठ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी इतिहासका ती तमाम अवश्यकताहरुको जगमा उभिएको छ, भविष्यका प्रक्षेपणहरुको संघारमा खडा भएको छ। तसर्थ। यसको सफलता इतिहासको आवश्यकता हो।
११ जेठ - भेटेनरीको जागिर छाडेर पोखरामा भैंसी पालन गरिरहेका किसान भन्छन्, विदेशिने युवाहरुलाई यतै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं।
२१ बैशाख - मोदीले धेरै वर्षअघि ‘पथिक’ को रुपमा नेपाल भ्रमण गरेको बताएपनि कहिले र कुन बाटो हुँदै नेपालको भ्रमण गरे भन्ने चाहिं खुलाएका थिएनन्। हिन्दु धर्मका कट्टर अनुयायी मोदीले यात्राबारे धेरै नबताए पनि उनी तीर्थालुका रुपमा नेपाल आएको प्रष्ट हुन्छ।
१९ बैशाख - जबसम्म म शक्तिशाली बन्दिनँ, जबसम्म म कसैले चोट पुर्‍याउन नसक्ने बन्दिनँ, तबसम्म म आफूलाई सफल ठान्ने छैन। मेरो लागि सफलता भनेको पैसा कमाउनुसरह हो। म पुस्तक लेख्न चाहन्छु। तर खासमा चाहिँ म पुस्तक बेच्न चाहन्छु। म मेरा पति आत्तिने गरी अग्रिम भुक्तानि लिन चाहन्छु, वार्षिक दुई पटक मोटो रोयल्टी चाहन्छु।
१२ बैशाख - ‘ब्युटी बोन देखिएपछि झन् राम्रो नि’ भन्छन् मान्छे। प्रशंसा त ठिकै हो, तर अलि पुराना मान्छेचाहिँ ‘दही जमायो भने पनि हुन्छ त्यो खाल्डोमा’ भन्छन्।